Golaha Amaanka Oo ka hadlay Dhex dhexaadinta Midowga Africa Bilaabayo – XAMAR POST
Golaha Amaanka Oo ka hadlay Dhex dhexaadinta Midowga Africa Bilaabayo
Xubnaha ku jira Golaha Amaanka Qaramada Midoobeey oo fadhi ka yeeshay xaalada Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in lagama maar maan tahay sidii loo heli lahaa,weji ka duwan tan loo biro tumanayo isku dhac ka dhex qarxa Soomaalida.
Waxay soo dhaweeyeen Safiirada ku jira Golahaasi in Midowga Africa qaato doorkiisa ah in la dhex dhexaadiyo Qolyaha isku haya Siyaasada Soomaaliya ee dib udhaca khilaafkaasi sababtay doorashadii la filayey.
Golaha Loo dhan yahay Qaramada midoobeey waxay Madaxweynaha Congo,Ahna Gudoomiyaha Midowga Africa Xilligaan Felex Tshasakedi,ugu baaqeen in uu maskax deggan ku qiimeeyo halka ay ka jirto Xasarada Siyaasadeed Soomaaliya.
Hadalka Goluhu waxa uu kusoo beegmayaa xilli Isniintii Madaxweyne Farmaajo uu Magaalada Kinshasa kula soo kulmay Gudoomiyaha Midowga Africa uuna ka codsaday sida wararku sheegayeen inuu wada xaajood ka dhex bilaabo isaga iyo Mucaaradka Soomaaliya.
Warar ay Nation Media heshay ayaa sheegaya in xitaa arintaan uu Madaxweynaha Congo si xal uga gaaro xiisada siyaasadeed Soomaaliya uu la tashi kala sameyn doono Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo shalay gaaray Magaalada Kinshasa.
Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa ka dhex jira Khilaaf diblomaasi oo meel sare gaaray,iyadoo dawlada Federaalka Soomaaliya ay xiriirkii dhinaca Diblomaasiyada bilo ka hor ugoysay Kenya.
R/wasaare Rooble oo kala diray guddigii doorashada heer federaal
Dhageyso: Maxkamada Puntland Oo Shabkad Al shabaab ah Baaritaan ku heysa